Akhlaaq - Wikipedia
Akhlaaq (ingiriis principle) waxa weeyaan dhaqan, iyo adaab fiican. Qaanuun ahaan waxaa loo arka hagto la raaco. Akhlaaqda waa dhaqan hagaagsan oo haga sida ay tahay in qofku u dhaqmo amaba ula dhaqmo dadka iyo deegaanka. Sidaa si la mid ah, Akhlaaqdu waa ay noocyo badan tahay. Waxaa jirta Akhlaaq dhanka labiska ah.
Akhlaaq, anshax ama damiir (=morals) waxaa si fudud loogu qeexaa in ay tahay kala garashada saxa iyo khaladka, samaha iyo xumaha, in la kala sooco waxa ay tahay in la sameeyo iyo waxa ay tahay in laga fogaado, …iwm.
Akhlaaqdu waa arrin lamahuraan u ah jiritaanka bulshada. Suurogalna ma ah in bulsho jirto haddii aysan lahayn xeerar nidaamiya xiriirka xubnaha bulshada midba inta kale la wadaago, oo u noqda halbeeg ay ku qiimayso habdhaqanka xubnaha bulshada, laguna ogaado waxa ruuxu hagaajiyey iyo waxa uu halleeyey.
Akhlaaqdu dhankaas waxay kala mid tahay ciyaaraha la dheelo. Si loo kala garto in ciyaartooydu gafey iyo in kale, waa in marka hore ciyaartu xeerar leedahay. Haddii ciyaartu aysan xeerar lahayn, waxaa adkaanaya in la kala garto waxa ciyaartooydu uu saxay si looga abaalmariyo ama waxa uu khalday si loogu ganaaxo.
↑ "Nuqul Archive". Waxaa laga kaydiyay the original 2018-03-23. Soo qaatay 2018-09-21. Barameter aan la aqoon |ciwaan= ignored (caawin)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Akhlaaq&oldid=222171"
Last edited on 29 Oktoobar 2021, at 16:00
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Oktoobar 2021, marka ee eheed 16:00.